गाडीको कुम्भमेलामा अफरको लहर, कसले के ल्याए ?
काठमाण्डौ । सवारी साधनहरुको कुम्भ मेला नाडा अटो शो आज(मंगलबार)देखि सुरु हुँदैछ । काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीहलमा सुरु हुने मेलामा विभिन्न कम्पनीका स्टलहरु रहनेछन् । चार पांग्रे र दुई पांग्रे सवारीको कुम्भ मेलाको रुपमा हेरिएको यो इभेन्टका क्रममा धेरै गाडी कम्पनीहरुले विभिन्न अफर सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । ठूला...
काठमाण्डौ । फाक्सबैगनको नेपालका लागि आधिकारित बिक्रेता पूजा इन्टरनेशनल नेपाल प्रालिले फाक्सबैगनको नयाँ मोडलको गाडी ‘पोलो १.०’ बजारमा भित्र्याएको छ । कम्पनीले आइतबार काठमाण्डौमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नयाँ गाडीको लञ्च गरेको हो । ९९९ सीसी र ७६ एचपी इञ्जिन क्षमता रहेको सो गाडी इन्धन बचतमा कोशेढुंगा साबित हुने कम्पनीको दाबी...
हुण्डाईको फेस्टिभ अफर: नगद छुट, सुन, निःशुल्क बिमादेखि कार जित्ने अवसर
काठमाण्डौ । हुण्डाई अटोमोवाइल्स नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हुण्डाई फेस्टिभ डिलाइट योजना ग्राहकमाझ ल्याएको छ । यो योजनाको अवधि यही भदौ २१ गतेदेखि कार्तिक २७ गते २०७५ सम्म लागू हुनेछ । यो योजना दशैं, तिहार र छठ उत्सव मनाउने लक्ष्यसहित ल्याइएको हो । यस योजनाअन्तर्गत ग्राहकहरुले आकर्षक नगद छुट र १...
बजाजको मोटरसाइकल किन्दा पाकेट फुल !
काठमाण्डौ । बजाज अटोको मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीले योपटकको दशैंतिहारको अवसरमा आफ्ना ग्राहकहरुको पकेट भर्न बजाज पाकेटफूल नामको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनामा बजाजको कुनै पनि मोटरसाईकल खरिद गर्दा ग्राहकले एउटा स्क्र्याच कार्ड प्राप्त गर्नेछन् । जसको एउटा भागमा स्क्र्याच गर्ने...